Amplitude: Analytics amin'ny finday ho an'ireo mpanapa-kevitra | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 16, 2013 Alatsinainy, Septambra 16, 2013 Douglas Karr
Amplitude dia fampiharana finday tsotra Analytics sehatra ho an'ny mpandrindra hampidirina. Ny sehatra dia misy famakafakana fotoana tena izy, dashboard interactive, fitazonana ny cohort, fantsom-baravarankely haingana, tantaram-piainan'ny mpampiasa tsirairay ary fanondranana data.
Ny drafitra matihanina, orinasa ary orinasa dia misy koa famakafakana fidiram-bola, fizarazaran'ireo mpampiasa, fangatahana azo ovaina, fanondroana doka Analytics, fidirana mivantana amin'ny database ary fidirana manokana arakaraka ny fonosana nosoratanao anarana.
Ny fampidirana amin'ny Amplitude dia tsy maintsy andalana kaody tokana ao amin'ny app anao. Raha vantany vao tafiditra ianao, dia hanara-maso ireo mpampiasa mavitrika isan'andro, isan-kerinandro, ary isam-bolana, fivoriana, fitazonana, karazana fitaovana, sehatra, firenena, fiteny, kinova fampiharana, toerana, ary maro hafa ivelan'ny boaty. Manampia tsipika kaody hanarahana hetsika fanampiny ao anatin'ny fotoana iray.
Tatitra momba ny fihazonana ny amplitude:
Tags: amplitudefitaterana ny fantsonaanalytics amin'ny findayanalytics amin'ny findayfitazonana ny fampiharana findayanalytics momba ny fampiharana findayfitazonana ny fampiharana findaytatitra momba ny fitazonana